छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसो भए आजैबाट यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस् ! – Online Khabar 24
छिटो–छिटो पिसाब लाग्ने समस्या छ ? उसो भए आजैबाट यी खानेकुरा खान सुरु गर्नुहोस् !
October 26, 2021 October 26, 2021 by admin admin
भिडियो हेर्न तल थिच्नुस,
काठमाडौँ । प्रायः मानिसहरू शरीरका स’साना सम’स्या’लाई बेवास्ता गर्छन् । जस्तो, घरीघरी पि’साब आउनु !
दिनमा पाँच चोटिसम्म पिसाब आएको ठीकै हो किनकि यसबाट मि’र्गौला स्व’स्थ रहेको जानकारी पाइन्छ तर १०–१५ चोटि आयो भने चाहिँ ख’तरनाक पनि हुन सक्छ ।
छि टछिटो पि’साब आउनु भनेको मधुमे’हको पनि लक्षण हुन सक्छ । तपाईंलाई पनि यो समस्या छ भने चिकि’त्सककहाँ गएर जँचाइहाल्नुस् । तर यसका साथसाथै केही घरेलु उपाय अपनाउनुभयो भने पनि समस्याबाट मु’क्ति पाउनुुहुन्छ ।
दही दहीमा प्रोबा’योटिक ब्या’क्टेरिया हुन्छ जसले शरीरमा की’टाणु बढ्न दिँदैन । दिनदिनै दही खाने गर्नुभयो भने घरीघरी पिसाब आउँदैन ।
तिल कैलो तिलको दानासँग सक्खर वा ज्वानो खानुभयो भने पनि पिसा’बको समस्या’बाट मुक्ति पाइन्छ ।
मह र तुल’सी एक चम्चा महका साथ तीनचारवटा तुलसीका पात मिसाएर खाली पेटमा खानुभयो भने सम’स्या स’माधान हुन्छ।
कुलथी अलिकति कुलथीलाई सक्खरसँग बिहानबिहानै खानुभयो भने पनि मू’त्र सम’स्याबाट मुक्त हुनुहुनेछ।
अनार अनारको बोक्रालाई पिँधेर त्यसमा पाँच ग्राम पानी मिसाएर पेस्ट बनाउनुस् । दिनदिनै त्यो खानुभयो भने घरीघरी पिसाब लाग्दैन ।
मेथी मेथीको धू’लोमा सुक्खा अदुवा र मह मिसाएर पानीसँग दिनमा दुई चोटि पिउनुभयो भने पनि लाभ पाउनुहुन्छ । यो पनि पुरा खबर,
किड्नी अर्थात ‘मृगौ’ला शरी’रको निक्कै महत्वपूर्ण अंग मध्ये एक हो ।यसले शरीरमा रगत सफा गर्ने देखि, हार्मोन बनाउने, खनिज सोक्ने, मुत्र उत्पादन गर्ने, टक्सिन अर्थात ख’राव प’दार्थहरुलाई शरी’रबाट निकाल्ने तथा ए’सिडको सन्तुलन बनाउने जस्ता काम गर्छ ।
यहाँ हामीले दैनिक जीवनमा गर्ने १० गल्तीको चर्चा गरिएको छ जसले मृगौलालाई हानी पुर्‍याउँछ ।
२ नून बढी : खानामा चर्को नून खाने बानी छ भने यसले रक्त चाप बढाउँछ । यसले मृगौलामा दवाव पैदा गर्छ । तपाँइले दिनमा ५ ग्राम भन्दा बढी नून खानु हानिकारक छ ।३ पिसाव रोक्ने : यदि पिसाव आउँदा पनि पछि जाउँला भनेर बस्ने बानी छ भने आजै देखि बानी सुधार्नुस् । पिसाव रोक्ने बानीले मृगौलामा पत्थरी हुने र मृगौला फेल नै हुने खतरा समेत पैदा गर्छ ।
नयाँ पुस्ताबाट साभार गरियको खबर ।
Prevश्रीमती र छोरीको ह’त्यामा सं’लग्न तामाङ प’क्रा’उ ! घाँटी तथा शरीरको विभिन्न भागमा टो’केको दाग, यसरी बाँचे बुवा
nextयी हुन् घरमा राख्नै पर्ने पाँच मूर्तिहरु, मूर्ति राख्दैमा मात्र पनि मिल्नेछ खुशी र सुख !